ပဟေဋိများစွာဖြင့် တပ်မတော်နေ့ (မောင်ထိန်ဝင်း မရမ်းကုန်း)
Posted: 29 Mar 2013 06:38 AM PDT
ထို့ကြောင့် ဤကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်ကွန်ယက် ဆက်နွယ်မှုတို့သည် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် အစိုးရိမ်ရဆုံး၊ အန္တရာယ်အကြီးမားဆုံးသော အချိန်ကာလတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိတော့သည်။ အကယ်၍များ ဤဖြစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်များသည် မိမိနှင့်မဆိုင်၊ မိမိနှင့်မပတ်သက်ဟူသော အတ္တသမားတစ်ယောက်၏ အတ္တဝါဒီခံယူချက်ဖြင့် "ငါဆိုမည့်ပွဲ၊ ငါကမည့်ပွဲ၊ ငါဟောမည့်ပွဲတွေကို သက် ဆိုင်ရာမြို့နယ် အာဏာပိုင်တွေကတောင် ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတာဘဲ၊ ပွဲပါမင့် ကျပြီးသားဘဲ၊ ဒေသခံတွေ ကလည်း တောင်းတနေတာဘဲ… ဒါကြောင့် ငါကတော့ ကမှာဘဲ၊ ဆိုမှာဘဲ၊ ဟောမှာဘဲ" ဟူသော စိတ်ဓါတ်ခံယူချက်မျိုးဖြင့် ကပြ၊ ဟောပြော အသုံးခံမည်ဆိုပါက စိုးရိမ်စိတ် ကြီးထွားနေကြသော ပြည်သူ လူထုတို့အား စော်ကားခြင်း (သို့) အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုကို အားပေးလှုံ့ဆော်ခြင်းဟူသော ကြံရာပါ တရားခံအဖြစ် မြန်မာ့သမိုင်း၏ တရားခံဆိုးထဲတွင် ပါဝင်သွားပေလိမ့်မည်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝက မိဘ၊ အဘိုးအဘွားတို့မှ ကလေးငယ်လေးများအား နောက်ပြောင်ကျီစယ် ဆော့ကစားခဲ့သော "ရှေ့ဂျွမ်းလေးထိုးပါဦး … နောက်ဂျွမ်းလေးထိုးပါဦး … မျောက်ဖိုးစိန်လေးရေ" ဟူသော မြှောက်ပင့်ကျီစယ်၊ ဆိုခဲ့သော စကားလေးအတိုင်း အနုပညာရှင်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေး သမားများအနေဖြင့် ယခုလက်ရှိတိုင်းပြည်အတွက် စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေတွင် ပွဲပါမင့်များ ခွင့်ပြုသည် ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ မိမိတို့၏ အတ္တများကိုဖြုတ်၍ အများအကျိုးအား ရည်သန်သော စိတ်စေတနာ တို့ဖြင့် ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာ၊ ကိုယ့်မြို့နယ်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ပြင်ပပယောဂများ မဝင်ရောက်နိုင် ရန်အတွက် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ကြရန်နှင့် "ရှေ့ဂျွမ်းလေးထိုးပါဦး၊ နောက်ဂျွမ်းလေးထိုးပါဦး၊ မျောက်ဖိုးစိန်လေးရေ" ဟူ၍ ချော့မြူတိုင်း မကမိဖို့ အရေးကြီးပါကြောင်း ပရဟိတစိတ်ထားဖြင့် အသိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါတော့သည်။
Posted: 28 Mar 2013 10:24 AM PDT
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာ (၆၈)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ကို ထူးခြားခမ်းနားစွာကျင်းပသွားတာကို တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေ တွေ့မြင်ကြည့်ရှုလိုက်ရပါတယ်။ အရင်.အရင် ဘယ်တုန်းကမှ စစ်တပ်က . သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လက်နက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြသလေ့မရှိပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရှိလိုက်ရတော့ အစတုန်းကတော့ တပ်မတော်နေ့စစ်ရေးပြကို ပြီးအောင်မကြည့်ရှုဘူးတဲ့ ကျွန်တော် ဒီနှစ်မှာတော့ ဘာတွေထပ်ပြီး အထူးအဆန်းတွေ တွေ့မြင်ရအုံးမလဲဆိုပြီး ဆက်ကြည့်နေမိပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမြောက်တွေ၊ သံချပ်ကာတွေ၊ ရေဒါတွေ၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကြီးတွေကို စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်ရှုနေတဲ့ အချိန်မှာတင် လေတပ်ကလည်း ရဟတ်ယာဉ်တွေ၊ တိုက်လေယာဉ်တွေပျံသန်းပြပြီး ဟန်ရေးပြသွားတာတွေကို ကြည့်ရှုလိုက်ရပါသေးတယ်။
နောက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းကို ဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ တပ်မတော်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကို အရင်နှစ်တွေကအတိုင်းပြောကြားသွားပေမယ့် ဒီနှစ်မိန့်ခွန်းမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နာမည်ကို သုံးကြိမ်လောက် ထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာကို ထူးဆန်းစွာ ကြားမိလိုက်ပါတယ်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ မိန့်ခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ(NDF)နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှ ကြိုဆို ထောက်ခံကြောင်းတွေကိုလည်း ကြားသိနေရပါတယ်။
ထူးခြားတာတစ်ခုကလည်း တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တော်ကြီးများနေရာမှာ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်လို့ လူသိများတဲ့ NLD ဥက္ကဌကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရလို့ပါပဲ။ ဒါကတော့ တော်တော်လေးကို ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ ဘယ်တုန်းကမှလည်း ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတယ်လို့ သတင်းမကြား၊ နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက်အတွင်း တပ်မတော်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေမှာ ဘယ်တုန်းကမှ တွေ့ရခြင်းမရှိတဲ့ သူတစ်ယောက် ဒီနှစ် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားမှာတွေ့ရတာကဒီနှစ်တပ်မတော်နေ့ရဲ့ ထူးခြားမှုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်တပ်မတော်နေ့မှာ အံ့သြဘနန်းထူးခြားတာတစ်ခုလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ အစိုးရအဖွဲ့က ဝန်ကြီးတွေ တက်ရောက်လာခြင်းမရှိတာပါဘဲ။ မနှစ်တုန်းက တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားကို ကျွန်တော် ကြည့်မိခဲ့ပါသေးတယ်. အစိုးရအဖွဲ့က လူကြီးတွေနဲ့ ဝန်ကြီးတော်တော်များများတက်ရောက်ခဲ့တာကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ စစ်တပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပြည်ထဲရေးတို့၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးတို့၊ ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးတို့လောက်သာ တက်ရောက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ လွှတ်တော်အသီးသီးက ကော်မတီဥက္ကဌတွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ ခေါင်းပေါင်းစ တလူလူနဲ့ တက်ရောက်လာတာကို တွေ့ရပြီး၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေက ခေါင်းဆောင်တွေအပြင် ဒေါ်စုရဲ့ နောက်နားမှာ တက္ကသိုလ်အရံတပ်ရင်းကလူတွေကိုလည်း တွေ့လိုက်ရပါသေးတယ်။ ဒီလိုလူတွေတောင် စုံစုံလင်လင်န့ အစိုးရအဖွဲ့က ဝန်ကြီးတွေ မတက်ရောက်လာတာကတော့ သူတို့ကို မဖိတ်ကြားလို့တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး၊ တပ်မတော်နေ့ဆိုတာက တပ်မတော်တစ်ခုတည်း သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဒီလိုအခမ်းအနားကြီးမှာ အရပ်ဘက်အစိုးရအဖွဲ့က လူကြီးတွေမတက်ရောက်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုအကြောင်းကိစ္စတွေ ရှိနေလို့လည်းဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်။
လွှတ်တော်အသီးသီးရဲ့ ကော်မတီအဖွဲ့တွေက ဥက္ကဌတွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက် လာတဲ့အတွက် လွှတ်တော်နဲ့ စစ်တပ် ပူးပေါင်းသွားလို့လား၊ အဆင်ပြေသွားလို့လားဆိုတာ စစ်တပ်ကို ထောက်ခံအားပေး အသိအမှတ်ပြုလို့သာ ဒီအခမ်းအနားကို လာတက်တာလို့ တွေးမြင်လို့ရပေမယ့် အရပ်ဘက်အစိုးရအဖွဲ့က လူကြီးတွေနဲ့ ဝန်ကြီးတွေ တက်ရောက်လာခြင်းမရှိတာကတော့ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ အဆင်မပြေလို့လား၊ အစိုးရအနေနဲ့ စစ်တပ်က ပါဝါရှိသွားမှာကို စိုးရိမ်နေလို့လား၊ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရ သဘောထားကွဲလွဲနေလို့လား၊ ဘာပြဿနာတွေ ရှိနေလို့လဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီနှစ် တပ်မတော်နေ့ကတော့ ထူးခြားမှုတွေ၊ ပဟေဋိတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို မှတ်သားလိုက်ရပါတယ်။